जनमतबाट नै संघीयता स्थापित भएको हो : अब्दुल्लाह अंसारी - Aadil Times
जनमतबाट नै संघीयता स्थापित भएको हो : अब्दुल्लाह अंसारी
१७ श्रावण २०७८, आईतवार ०८:२० | Aadil Times
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्राले सार्वजनिक गरेका मार्ग परिवर्तन नामक विचार बारे विद्यार्थी अभियन्ता अबदुल्लाह अंसारी भन्छन जनमतबाट नै संघीयता आएको छ। देशका हजारौं युवा युवतीहरुको बलिदान र संघर्ष बाट प्राप्त उपलब्धिलाई नकार्नेहरु राज्यमा लोक कल्याण कदापि गर्न सक्दैनन ।
आदिल टाइम्स सँग कुरा गर्दै कान्फिडेंस नेपालका कोषाध्यक्ष समेत रहेका अब्दुल्लाहले भने “ पूर्ण बहुमतबाट संविधान जारी हुनु के जनमत होइन ? संघीयतामा गई सके पछि भएको निर्वाचनमा जनताले दिएको म्यांडेट के जनमत होइन र? संघीयता समावेशिता धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरुले एउटा पनि सीट चुनावमा जनताले जिताएनन के त्यो जनमत होइन ? मिश्रा जी कहाँ को जनमतको बाँसुरी फुकदै हुनुहुन्छ थाहा भएन ? आखिर जनमत लिने बेलामा रविन्द्र मिश्रा पराजित हुनु भएको होइन र ,यति छिटो कसरी विर्सेका उनी ?